TTSweet: ၀က်သားတုတ်ထိုး၊ ကြာဆံကြော် ...
Posted by T T Sweet at 4:04 AM
Sunny January 12, 2011 at 5:54 AM
အဟင့်.. စားချင်တယ်နော်.. တီဆွိပုံတွေကြည့်ပြီး သွားရည်ကျနေရတယ်.. ဒီမှာတော့ သက်သတ်လွတ်စားနေရတယ်..
ကိုဇော် January 12, 2011 at 6:32 AM
မနက်ကတင် ကြာဇံတော့ ကြော်စားလိုက်တာ..
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တုတ်နဲ့ မထိုးမိတော့ဘူး။ ခရင်းနဲ့ပဲ ထိုးပြီး စားလိုက်မိလို့.. ဝက်သားခရင်းထိုး ဖြစ်သွားတယ် ဟီးးးးးးးးးးး
nyimuyar January 12, 2011 at 11:05 AM
ကြာဇံကြော်နဲ့ ဒုတ်ထိုး ဘယ်တော့မှ မရိုးဘူး။ နေ့လည်စာ မစားခင် လာကြည့်လိုက်တာ ဗိုက်ဆာသွားပြီ ဗျာ
ဖိုးတုတ် January 12, 2011 at 12:36 PM
မနက်စောစောစီးစီးရုံးမှာ အလုပ်မလုပ်သေးပဲ မဆွိရဲ့ ပို.စ်ကိုဖတ်တာ ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီဗျို. ၊ စားချင်စရာကြီး၊ ပင်နဆူလာမှာ ဆိုင်ဖွင့်လိုရပြီ ၊ ကွန်မန်.ရေးတဲ့သူတွေကို 80% discount ပေး ၊ အမြတ်မရ အရင်းပါမကျန်အောင် လာအားပေးပါ့မယ် ၊
Mon Petit Avatar January 12, 2011 at 1:39 PM
စားချင်တယ်ဒါလဲ ရန်ကုန် ပြန်ရမလို စင်ကာပူပဲသွားရမလို ဖြစ်နေပြီ
မြူးမြူး January 12, 2011 at 1:44 PM
စားချင်လိုက်တာ.. အိမ်လည်ဖိတ်ပါဗျိုးးးးး)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 12, 2011 at 2:13 PM
စလုံးရောက်ရင် မယ်ဆွိတို့အိမ် ရောက်အောင်ဝင်မယ်..
ဘယ်ဗျာ ..လူကို ဓါတ်ပုံတွေပဲ ပြပြပြီးနှိပ်စက်နေတာ..
SHWE ZIN U January 12, 2011 at 2:26 PM
အခုတောင်ပြေးစားချင်လာပြီ ရန်ကုန်ရောက်ရင် အဲဒီ၂မျိုး ရယ် မုန့်ဟင်းခါး ရယ် အရင်စားတယ် မန်းလေး ကကြာဇံကြော်နဲ့ ဒုတ်ထိုးက အဲလောက်မကောင်းဘူး
ပေတူး January 12, 2011 at 3:26 PM
အိမ်ကကောင် လုပ်မကျွေးတာ ကြာပေါ့။။ သွားရည် ကျသွားတယ်..
မေဓာဝီ January 12, 2011 at 5:46 PM
အိပ်ရာထဲက မထသေးဘဲ ကွေးရင်းဖတ်ပြီး သွားရည်ကျသွားတယ်။ ဗိုက်ဆာလာပြီ ......
သက်ဝေ January 13, 2011 at 1:32 AM
များနေပြီ... များနေပြီ... နည်းနည်းတော့ များနေပြီနော် ဒေါ်ဆွီတီ...
တကယ်ပါ ပုံတွေကြည့်ပြီး ဝက်သားမကြိုက်တဲ့သူတောင် အဲလို ကြာဆံကြော်လေးနဲ့ အချဉ်လေးနဲ့ တုတ်ထိုးလေး နဲနဲလောက်နဲ့ စားချင်လာတယ်...
Nge Naing January 13, 2011 at 8:51 PM
ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန် ၀င်လာတာ အစာအသောက်နဲ့ တန်းတိုးလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်မစားတဲ့စားစရာတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အိမ်က တယောက်နေရာမှာ ၀င်ပြီး ၀က်သားဒုတ်ထိုးတွေကို သွားရည်ယိုသွားတယ်။
I like that.I like that .
A ma , thanks for sharing,like it too much,not only this one, all of your posts, you are so sweet
Guest January 16, 2011 at 3:33 PM
Singapore မှာ ၀ယ်နိုင် တဲ့ တရုတ်မဆလာ Brand လေး တဆိတ်လောက်
T T Sweet January 16, 2011 at 5:29 PM
တရုတ်မဆလာကို5spices လို့ ခေါ်ပါတယ်။ brand ရယ်လို့တော့ မသိဘူး။ အောက်ထပ်က ကုန်စုံဆိုင်လေးတွေမှာ5spices လို့သာ မေးဝယ်လိုက်၊ သိကြပါတယ်။ NTUC မှာလဲ spices တွေထားတဲ့နေရာမှာ5spices ဆိုတာ ရှိပါတယ်တဲ့။
၀ီကီမှာတော့ brand လေးတွေ ပြထားတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Shinlay January 20, 2011 at 2:51 AM
Anonymous January 23, 2011 at 3:16 AM
do you know which is the good brand of tee kway? i seealot of them nowadays in NTUC, bakeries but i don't know which brand to choose.
do you know how to fry it too?
April July 31, 2011 at 11:54 AM
အမ .. အကယ်လို့ထန်းလျက်မရှိလို့မထည့်ရင်ရော .. အရသာ တစ်မျိုးပြောင်းသွားနိုင်လည်းမသိဘူး .. နောက် တရုတ်မဆလာ အစား ရန်ကုန်ကလာတဲ့ ကုလားလေး မဆလာ သုံးလို့ ရလားမသိဘူးနော် ..
T T Sweet July 31, 2011 at 11:59 AM
၀က်သားတုတ်ထိုးကို ကုလားလေးမဆလာထည့်လို့တော့ မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ မရှိရင် မထည့်တာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်နော်။
နာနတ်ပွင့်ထည့်ရင်လဲ တရုတ်မဆလာမထည့်လဲရပါတယ်။ နာနတ်ပွင့်ကတော့ ဘယ်နေရာမဆိုဝယ်ရတာ လွယ်တယ်လေ။
T T Sweet July 31, 2011 at 12:00 PM
မေ့နေလို့။ ထန်းလျှက်အစား သကြားလေးထည့်လဲရပါတယ် ။
Pwint Thit July 9, 2012 at 2:35 PM
Thanks you so much I want to making ;)
တီဆွိရေ အဲ့နာနတ်ပွင့်က ဘယ်နေရာမဆို ဆိုတော့ NTUC မှာရော ရလား ဟင် english လိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟင်
စီတီးဟောဆိုလဲ ဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်လို့ ၇လဲခင်ဗျ
T T Sweet May 6, 2013 at 9:58 PM
City Hall မှာတော့သေချာမသိဘူး။ HDB အောက်ထပ်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတွေမှာလဲ ရပါတယ်။ ကုလား ကုန်စုံဆိုင် လိုဟာမျိုးမှာလဲ ရပါတယ်။ NTUC မှာ သေချာပေါက်ရှိပါတယ်။ Star Anise လို့ခေါ်ပါတယ်။